I-120W iindawo eziphezulu zikhokelela ekukhanyeni izibane China Manufacturer
Inkcazo:High Bay 120W Amazon,120w Led Retrofit Lamp MIC,Ithenda ephezulu yeLay Bay
Home > Imveliso > I-High Bay Retrofit LED > I-120W iindawo eziphezulu zikhokelela ekukhanyeni izibane
Umzekelo No.: BB-YPD-025-A
1. Igama Power Supply Brand (bay 120w phezulu): MEANWELL
2. Ukushisa komsebenzi: -20 ℃ ukuya kuma-40 ℃
3. ( iholele izibane ze-retrofit ) I- Incandescent Equivalent: 400W MH / HPS / HID Light Bulbs
4. I- Angel Angle: 100 °
5.Izicelo eziphakamileyo zenze i-retrofit : IiNdlela, iindlela zokuPaka iimoto, oomasipala, iiNkonzo zoLuntu, iiNdawo zokuHlaba, iiNdawo zokuHlala, iiNdawo eziMandla, iZibonelelo zoLungiso, iiNkonzo zokuLondolozwa kweeNdawo zoLuleko kunye neeNgqungquthela.
Ubungakanani be-highbay ehamba phambili:
Iiprojekthi Zethu Imifanekiso:
Ulwazi lwenkampani yethu:
I-Shenzhen Bbier Lighting ine-ISO9001: I-Standard Standard kunye neNkokeli yokuThuthukisa zonke iiNkcazo zeeNdawo eziLondoloziweyo zamandla eziLondolozo zeMbane iiLuminaires ze-United States I-Distributor ye-Wholesale (Importer) kunye neSolution Inkampani yokukhanyisa. Isiqhamo sesiphumo se-E40 (isiseko se-Mogul) kunye nesibane esingu-E27 (isiseko esiphakathi) seNkampani yokuLondoloza iGoza iGesi. Isixazululo sinceda umthengi wethu ukuba asebenzise iiUtilities. Imbuyiselo yesibane sethu sinesigunyaziso se-ETL kunye nesitifiketi se-DLC. Ngoko umthengi wethu unokufumana kalula izaphulelo zabo. Ukufika kweli nqanaba. I-Bbier ibe yindleko yokuvelisa isibane se-LED yezigidi ezingama-50 Ukuthumela kwi-US ne-EU yemakethe.
Sigxininisa ngakumbi kwiinkonzo Ngoko umveliso wethu unokusungulwa kwezixhobo zokuvelisa ngoku sidibanisa izixhobo zokusebenza, umthengi womatshini weLOGO umakisha. Umshini we-Samsung LED SMD, uhlaziye umshini wokukhenkcela kunye nokutshiza umatshini wokunamathela wokuhlanganisa unxibelelwano lwee-lamp machnes njl. Sinokwenza isibonelo somthengi wesibane .etc LOGO zonke iintlobo ze-LED kwisiphene kunye nezixhobo zokuvavanya.
High Bay 120W Amazon 120w Led Retrofit Lamp MIC Ithenda ephezulu yeLay Bay High Bay 100W High Bay 80W High Bay 200w High Bay 150w Luminaire High Bay 100w Led